राजा बिरेन्द्रको हत्या भारतले गर्न लगाएको हो भन्दै चीनले गर्यो यस्तो सनसनी पूर्ण खुलासा – नेपाली सूर्य
राजा बिरेन्द्रको हत्या भारतले गर्न लगाएको हो भन्दै चीनले गर्यो यस्तो सनसनी पूर्ण खुलासा
January 1, 2018 January 1, 2018 Nepali SuryaLeaveaComment on राजा बिरेन्द्रको हत्या भारतले गर्न लगाएको हो भन्दै चीनले गर्यो यस्तो सनसनी पूर्ण खुलासा
इतिहास साक्षी छ, ठूल्ठूला घटना–दुर्घटनाबाट पाठ सिकेर धेरै राष्ट्रले अस्तित्वको रक्षा गरेका छन् । राष्ट्रिय स्वाभिमान बचाएका छन् । राष्ट्रिय एकताको संरक्षण गर्दै राष्ट्रहितको संवद्र्धन–सम्पोषण गरेका छन् । स्पेन, फ्रान्स र अस्ट्रियाले पटकपटक थिचोमिचो गरेपछि राष्ट्रलाई शक्तिशाली, निःस्वार्थी र विवेकशील नेतृत्व चाहिन्छ भन्ने इटालीका जनतामा चेतना आयो । मेजिनीकै समयमा राजा चाल्र्स अल्बर्टले इटालीलाई स्वाधीन तुल्याउन अस्ट्रियासँग युद्ध गरेका थिए । कस्टोजाको युद्धमा इटाली परास्त भयो । गणतन्त्रवादी नेता मेजिनीले राजालाई सल्लाह दिए, “म सहज स्थितिमा राजातन्त्रको समर्थन नगर्ने मान्छे तर आज राष्ट्र गम्भीर संकटमा छ । त्यसैले म राष्ट्र बचाउन तपाईंलाई (राजालाई) जुनसुकै मद्दत गर्न तयार छु ।” नोभोराको युद्धमा पनि राष्ट्र परास्त भएपछि राजाले छोरा भिक्टर इमान्युअललाई गद्दी सुम्पे ।
उदार हृदयका भिक्टरले गणतन्त्रवादी नेता मेजिनीसँग मिलेर राष्ट्रियताको रक्षा गर्ने योजना बनाए । राष्ट्रिय एकता र अखण्डता बचाउन मेलमिलापको नीति लिए । मेजिनीको सल्लाहमा प्रबल राष्ट्रवादी नेता क्याभरलाई राजाले प्रधानमन्त्री बनाए । उनले इटालीका जनतामा राष्ट्रवादको अपूर्व लहर ल्याए । क्याभरले भने ‘इतालिया फारा दा से’ (इटाली आफ्नो रक्षा आफैँ गर्छ ।) विदेशी हस्तक्षेपविरुद्ध यो खुला चेतावनी र सन्देश थियो ।
२०४३ सालमा प्रधानमन्त्री भएका मरीचमानसिंह श्रेष्ठ राजा वीरेन्द्रसँग खुलेर छलफल गर्थे भन्ने कुरा उनका अन्तर्वार्ता र उनीसँगको कुराकानीका प्रसंगमा छर्लंग भएका छन् । २०४५ सालमा सेनाले चीनबाट एन्टी एयरक्राफ्ट गन लगायतका सामग्री झिकाउँदा भारतले १५ महिनासम्म नेपालविरुद्ध नाकाबन्दी ग¥यो । भारतका विदेशसचिव एस. के. सिंह ६ बुँदे प्रस्ताव लिएर आए । अब भारतसँग मात्र हतियार किन्नुपर्ने, भारतको स्वीकृतिबेगर कुनै राष्ट्रसँग कूटनीतिक सम्बन्ध राख्न नपाइने, व्यापार र पारवहनमा भारतको स्वीकृति लिनुपर्ने आदि विषय त्यसमा उल्लेख थियो । राजा वीरेन्द्रले सो प्रस्तावबाट नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान खरानी हुन्छ भन्दै ठाडै अस्वीकार गरिदिए । त्यसपछि भारतले दिल्लीका नेता एवं पत्रकारहरूको हुल पठाएर “राजा वीरेन्द्रको एकाधिकार र निरंकुशता तोडेर दलहरूका हातमा शासन व्यवस्था ल्याउनुपर्छ” भन्दै २०४६ सालको आन्दोलन सुरु गरायो ।
चन्द्रशेखर, हरकिशनसिंह सुरजित, सुब्रमव्यम् स्वामी, एम.जे. अकबरलगायतका नेताले राजा वीरेन्द्र ‘तानाशाह’ हुन् भन्दा नेपालका कैयन् नेताले थप्पडी बजाए । बिपीका जेठा छोरा प्रकाश कोइरालादेखि पूर्वप्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यसमेत धेरै राष्ट्रवादीहरू २०४६ सालको आन्दोलनका पक्षमा थिएनन् ।
साभार: लालिगुरास डट कम
नेपालका सडकहरुमा धमाधम चार्जिङ स्टेशन राखिदै ।
सारा नेपाली लाई आयो दुखद खबर
मन्त्री बाँस्कोटालाई भैरहवामा अलपत्र पारेर बुद्ध एयर काठमाडौं उडेपछि…
April 16, 2019 Nepali Surya
December 3, 2017 Nepali Surya
बम बनाउने पदार्थसहित भारतीयहरू पक्राउ पर्दा सरकार मौन
December 5, 2017 Nepali Surya